सावधानीहरु तपाइँ कती घर प्रयोग आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण को लागी जान्नुहुन्छ?
सतर्कताहरू तपाई आईपीएल कपाल हटाउने उपकरणका लागि कती जान्नुहुन्छ? （पहिलो）
समय: 2019-08-23 हिट्स: 202
घर प्रयोग आईपीएल कपाल हटाउने मेसिन को लागी सावधानी के हो? धेरै युवा महिलाहरु भन्छन् कि उनीहरु होम आईपीएल कपाल हटाउने मेसिन को उपयोग पछि कालो भएको छ। वास्तव मा, यो यस तथ्य को कारण हो कि कपाल हटाउने पछि कुनै सावधानी छैन।
घर आईपीएल कपाल हटाउने मेसिन को उपयोग गर्नु अघि, तपाइँ केहि चीजहरु लाई ध्यान दिन आवश्यक छ। आज, शेन्जेन नोबल खुफिया र साथीहरु सँगै बाहिर जान्न को लागी आउँछन् ...
पहिलो, घर ipl कपाल हटाउने मिसिन उपकरण प्रयोग गर्नु अघि मुंडा हुनु पर्छ।
घर ipl कपाल हटाउने मेसिन को उपयोग गर्नु भन्दा पहिले, साना बहिनीहरु पहिले दाह्री ध्यान दिनु पर्छ, र यो सबै भन्दा राम्रो छ सकेसम्म छोटो दाँत। यस कारणले गर्दा, घर आईपीएल कपाल हटाउने ऊर्जा छाला भित्र कपाल कपाल को लागी अधिक सजीलो लागू गर्न सकिन्छ। यदि घर प्रयोग आईपीएल कपाल हटाउने सीधा दाढी बिना प्रयोग गरीन्छ, कपाल हटाउने को प्रभाव धेरै कम हुनेछ।
दोस्रो, घर ipl कपाल हटाउने मेसिन गर्मी जोखिम पछि टाढा हुनुपर्छ
घर आईपीएल कपाल हटाउने मेसिन राम्रो छ, तर साना बहिनीहरु लाई ध्यान दिनु पर्छ घाममा उजागर पछि छाला बाट बच्न को लागी। किनभने जोखिम पछि, हाम्रो कपाल र छाला को कपाल follicles मा मेलेनिन छ। यो सतही pigments सक्रिय हुन को लागी सक्रिय हुन सक्छ, जो गहिरो छाला pigmentation वा pigmentation को लागी नेतृत्व गर्न सक्छ। सबै भन्दा राम्रो कपाल हटाउने वसन्त वा जाडो मा छनौट गर्न को लागी छ, किनकि छाला ट्यान्ड र सेतो छैन, र होम आईपीएल कपाल हटाउने मेशिन कपाल कूप को मेलेनिन मा भूमिका खेल्न सक्छ, जो अधिक लक्षित छ।
तेस्रो, घर आईपीएल कपाल हटाउने मेसिन साधन प्रयोग गर्दा आँखा को रक्षा गर्न को लागी ध्यान दिनु पर्छ
त्यहाँ केहि घर ipl कपाल हटाउने मेसिन बजार मा कि लेजर मा भरोसा छ। जब घर आईपीएल कपाल हटाउने मेसिन प्रयोग गरीन्छ, त्यहाँ प्रकाश हुनेछ। आँखा मा जलन बाट बच्न को लागी, यो धूप का चश्मा ल्याउन को लागी सबै भन्दा राम्रो छ।
चौथो, घर प्रयोग आईपीएल कपाल हटाउने छाला सीधा छाला को लागी ध्यान दिनु पर्छ
जब कान्छी बहिनीहरु आईपीएल कपाल हटाउने घर को उपयोग को उपयोग, उनीहरु घर आईपीएल कपाल हटाउने मेशिन साधन को छाला को लम्बवत साधन को पोर्ट मा ध्यान दिनु पर्छ, अन्यथा, यो प्रकाश उत्सर्जन गर्न सक्दैन, यस प्रकार कपाल हटाउने प्रभाव लाई प्रभावित गरीरहेको छ।
पाँच, घर ipl कपाल हटाउने मेसिन टैटू र गहिरो छाला क्षेत्रहरु को उपयोग बाट बच्नु पर्छ
घर आईपीएल कपाल हटाउने मेसिन को उपयोग को प्रक्रिया मा, साना बहिनीहरु लाई ध्यान दिन को लागी टैटू र गाढा भागहरु संग भागहरु बाट बच्न जरूरी छ। किनभने यी भागहरु सामान्यतया मेलेनिन को एक ठूलो मात्रा मा संकलन गरिएको छ, आईपीएल (बलियो पल्स प्रकाश) को सिद्धान्त मेलेनिन बलियो प्रकाश को अवशोषित गर्न को लागी हो। पिग्मेन्ट आमा कोषहरु लाई बलियो प्रकाश को लागी उजागर गरे पछि, पिग्मेन्ट टुटेको छ, र अधिक मेलेनिन आफैंलाई सुरक्षित राख्न को लागी स्रावित हुन्छ। यसले छालालाई कालो बनाउँछ।
यो पनि कारण हो कि सामान्य छाला टोन संग मानिसहरु अक्सर खेल पछि छोटो अवधि मा गाढा महसुस गर्छन्।
घर प्रयोग आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण को बारे मा अधिक सावधानी, र शेन्जेन नोबल खुफिया को लागी तपाइँको लागी अर्को पटक साझा गर्न को लागी तत्पर
अघिल्लो: घर ipl कपाल हटाउने उपकरण को use प्रकाश between बीच के भिन्नता छ?
अर्को: सतर्कताहरू तपाई आईपीएल कपाल हटाउने उपकरणका लागि कती जान्नुहुन्छ? （Next）